महिलाहरु ‘टपलेस’ भएर नुहाउन पाउने कि नपाउने? मतदानबाट गरियो निर्णय – Nepal Journal
महिलाहरु ‘टपलेस’ भएर नुहाउन पाउने कि नपाउने? मतदानबाट गरियो निर्णय
Posted By: Nepal Journal June 12, 2018 | २९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ११:४३
स्विमिङ पुलमा महिलाहरुले ‘टपलेस’ भएर नुहाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद यति धेरै बढ्यो कि प्रशासनले त्यसको निर्णयका लागि मतदान गर्नुपरेको छ । र यो विवादमा टपलेस भएर नुहाउन पाउने पक्षमा उठेका महिलाहरुको जीत भएको छ ।
यो प्रसंग हो क्याटलोनियास्थित बार्सिलोना नजिकैको एउटा गाउँको । लामेतिया डिल व्यालियास गाउँमा भएको उक्त मतदानमा टपलेस भएर नुहाउन पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा ६१ प्रतिशत र विपक्षमा ३९ प्रतिशत मानिसहरुले मतदान गरेको नतिजा आएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय क्याटलोन प्रशासनले यस मतदानको आयोजना गरेको थियो । यसको नतिजा कानुनी रुपमा १६ वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलाहरुमा लागू हुनेछ ।
खासमा केही दिन पहिले गर्मीको बेला जब दुई महिला एउटा स्विमिङ पुलमा टपलेस भएर नुहाइरहेका थिए । तब त्यहाँ रहेका एक लाइफ गार्डले उनीहरुका विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिए । प्रहरी त्यहाँ पुगे र उनीहरुले ती दुई महिलाहरुलाई तुरुन्तै बिकिनी टप लगाउनका लागि आदेश दिए ।
यो घटनापछि प्रहरी र प्रशासनविरुद्ध टपलेस हुन पाउनुपर्छ भन्ने महिलाहरुले विरोध प्रदर्शन गरे । अर्कातिर टपलेस हुनु हुँदैन भन्दै ती महिलाहरुको विरुद्धमा गाउँका पुरुष र महिलाहरुको एउटा समूह बिकिनी टप लगाएर स्विमिङ पुलमा पुगे । त्यही बेलाबाट मानिसहरुले प्रशासनमा यसको निर्णयका लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्नेमा दबाब दिएका थिए ।
यो गाउँ बार्सिलोनाबाट करिब ३५ किलोमिटर उत्तरतर्फ पर्दछ । यो गाउँमा करिब आठ हजार जनसंख्या रहेको छ । बीबीसी
Be the first to comment on "महिलाहरु ‘टपलेस’ भएर नुहाउन पाउने कि नपाउने? मतदानबाट गरियो निर्णय"